अभिनेत्री पायलले अनुरागको घरमा भएको त्यो घटनाको वास्तविकता उतारदिएपछि... - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » अभिनेत्री पायलले अनुरागको घरमा भएको त्यो घटनाको वास्तविकता उतारदिएपछि…
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री पायल घोषले फिल्म निर्माता अनुराग कश्यपमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छिन् । निर्देशकले भने आफुमाथि लगाएको आरोप निराधार र गलत भएको बताउदै आएका छन् । अभिनेत्री घोषले मिडियामा नै अनुराग कश्यपमाथि आरोप लगाएर सबै कुरा भनेकी थिइन् । घोषले अनु्राग सहनै नसक्ने कार्य गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
पायलले एक अन्र्तवार्तामा २०१४ मा अनुरागले आफुलाई जोडबल गरेको बताएकी थिइन् । निर्देशकसँग उनकै कार्यालयमा पहिलो पटक भेटेको पनि बताएकी थिइन् । अनुरागमाथि पायलले बारम्बार फोन गरेर बोलाएको, सामान्य कपडा लगाएर आउन लगाएको, सँगै खाना खाएको र उनको बारेमा सबैकुरा सोधेको समेत आरोप लगाएकी छिन् ।
अनुराग कश्यपले एकदिन पायललाई घरमा बोलाएका थिए । पायल घरमा जाँदा धुम्रपान गरेर बसेका अनुरागले उनको पुरानी श्रीमती कल्कीको जुत्ता देखाएका थिए । केटीहरुले रणबीर कपुरसँग फिल्ममा खेल्न आफुसँग केटीहरु सु’त्नको लागि तयार भएको समेत बताएको आरोप पायलले अनुरागलाई लगाएकी छिन् ।
पायलले पटक पटक यसबारेमा बोल्न खोजेपनि घर परिवार र साथीहरुले भविष्यमा यस्ता समस्याबाट बच्नको लागि आफुलाई चुप रहन लगाएको खुलासा गरेकी छिन् ।
क्यान्सर अन्तिम स्टेजमा पुगेका सञ्जय दत्तलाई सास फेर्न मुस्किल भएपछि अस्पताल भर्ना
महानायक अमिताभ बच्चन बारे एक अनौंठो रहस्यको पर्दा खुल्यो !
आज दुनियाँकै मनमा बसेकी अभिनेत्री रेखाको जन्मदिन, खुले अति १० गोप्य रहस्य
स्टाइलमा सबैभन्दा अघि छिन् रकुल प्रीत सिंह, हेर्नुहोस् जन्मदिन स्पेशल शानदार १० तस्विर
चर्चित अभिनेत्री अल्लाहका नाममा समर्पित भइन् !
सुशान्त मृत्यु प्रकरणमा जोडिएकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती जेलबाट छुटिन्, आखिर के हो सत्य ?